2020 Human Rights Innovation Fellowship: Frequently Asked Questions (FAQs) - Unitarian Universalist Service Committee
2020 Human Rights Innovation Fellowship: Frequently Asked Questions (FAQs)
***The Call for Proposals for the 2020 UUSC Human Rights Innovation Fellowship is now closed.***
The UUSC Human Rights Innovation Fellowship isaone-year $25,000 grant awarded toacharitable organization (sometimes referred to asanon-profit, non-governmental organization, or civil society organization), designed to bring about systemic change by creating, nurturing, or spreading an innovation in human rights. These innovations may be new communications strategies, collaborations, legal strategies, methods of mobilization, technological or financial products or apps, path-breaking applied research, advances in corporate accountability, or other new approaches. The successful proposal will be rights-based, led by directly impacted communities, and provideanew, different, and timely solution.
What is the theme for the 2020 Fellowship?
The specific focus of the Innovation Fellowship this year is Collaboration on the Right to Belonging and Inclusion in Burma, aligning with UUSC’s Protecting Human Rights in Burma initiative, which focuses on partnering with locally-led grassroots groups to protect the rights of ethnic and religious minorities in Burma.
The proposed projects should meet the following criteria:
Be created by two or more organizations collaborating on the project proposal;
Align with the theme of Collaboration on the Right to Belonging and Inclusion in Burma;
Be consistent with UUSC’s mission and vision; and
Be led by impacted community members, in alignment with UUSC’s partnership model.
Possible examples of collaboration include: collaborations between human rights organizations from different ethnic nationalities, religious, or demographic groups; innovative communications strategies aimed at domestic audiences; or ideas to leverage religious networks.
The application is open to charitable organizations (non-profit, non-governmental, civil society organizations) with an innovative project that is relevant to the Fellowship’s theme.
In addition to the criteria elaborated above, UUSC will use the following criteria to select the winner of the Innovation Fellowship grant:
Alignment with the theme: Collaboration on the Right to Belonging and Inclusion in Burma
UUSC’s approach and values: The application must reflect UUSC’s values and be compatible with UUSC’s approach to Protecting Human Rights in Burma.
Impact: The project must positively impact or benefit affected communities in terms of scale and/or scope.
The letters of interest will be reviewed by UUSC andasmall group of finalists will be identified. Finalists will be asked to submitamore detailed proposal. From these proposals, UUSC will select the winning project.
Applications open: October 2019
Applications close: December 31, 2019
Finalists selected: January 17, 2020
Full Proposals due: February 14, 2020
Winning Project identified (with announcement to follow): March 16 2020
A grant of $25,000 USD to support the collaborative project.
What is required of fellows during the Fellowship?
Fellows will use the $25,000 in support of the plan outlined in the proposal and will participate inapartner call six-months after receiving the award to share an update on the project and will submitacompleted final report one-month after the conclusion of the project.
ယူယူအက်စ်စီ လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှု မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ် ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။
UUSC Human Rights Innovation Fellowship ယူယူအက်စ်စီ လူ့အခွင့်အရေး တီထွင်ဆန်းသစ်မှု မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ် သည် လူ့အခွင့်အရေးနယ်ပယ်တွင် တီထွင်ကြံဆမှုအသစ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ပျိုးထောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျှဝေဖြန့်ကျက်ခြင်း တို့ဖြင့် နည်းစနစ်ကျ သော အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း (ရန်ဖန်ရန်ခါ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်သော၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ဟုရည်ညွှန်းသည်) ကို တစ်နှစ်တာ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ ပေးအပ်မည့် အစီအစဥ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတီထွင်ကြံဆမှုအသစ်များသည် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူ ဟာအသစ်များ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ဥပဒေရေးရာ မဟာဗျူဟာများ၊ အရွေ့ဖြစ်ပေါ် အောင် ဖော်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ နည်းပညာ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးရာ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများ၊ အသစ်ထူးခြားသော လက်တွေ့အသုံးပြု သုတေသနများ၊ ကော်ပို ရိတ် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု တိုးတက်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ သို့မဟုတ် အခြား ချဥ်းကပ်မှုအသစ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ အခွင့်အရေးကိုအခြေခံသော၊ အကျိုးသက်ရောက်ခံရသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှ တိုက်ရိုက်ဦးဆောင်သော နှင့် သစ်လွင်သော၊မတူကွဲပြားသော၊အချိန်နှင့်အလိုက်ဖြစ်သော ဖြေရှင်း နည်းများကို အဆိုပြုသည့် အဆိုပြုလွှာများသည် ရန်ပုံငွေရရှိအောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်အတွက် အကြောင်းအရာ မှာအဘယ်နည်း။
ယခုနှစ်အတွက် တီထွင်ကြံဆမှု မိတ်ဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အဓိက ဦးတည်မှုသည် ယူယူအက်စ်စီ ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေးလူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေးများကို အကာ အကွယ်ပေးရန် ဒေသခံလူထုများဦးဆောင်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများနှင့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဦးတည်သည့် Protecting Human Rights in Burma မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု နှင့် ကိုက်ညီသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရပိုင်ခွင့်များပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်ခွင့် အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပြုသော လျှောက်လွှာများသည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည် –
စီမံကိန်းလျှောက်လွှာအတွက် ၂ ခု သို့မဟုတ် ၂ခုထက်ပိုသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်း ရေးသားလျှောက်ထားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရပိုင်ခွင့်များပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်ခွင့်အတွက် ပူး ပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း” အကြောင်းအရာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
ယူယူအက်စ်စီ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ (mission and vision) နှင့် ကိုက်ညီ သည်။
ယူယူအက်စ်စီ၏ မိတ်ဖက်ပါတနာလက်တွဲခြင်း စံပုံစံ နှင့်အညီဖြစ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက် ခံရသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဝင်များမှ ဦးဆောင်သည်။
ဖြစ်နိုင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဥပမာများမှာ – မတူကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနိုင်ငံ သားများ၊ မတူညီသော ဘာသာရေး သို့မဟုတ် နောက်ခံအနေအထားရှိအုပ်စုများမှ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ။ ပြည်တွင်းပရိသတ်များကိုဦးတည် သည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများ သို့မဟုတ် ဘာသာ ရေးဆိုင်ရာကွန်ယက်များအား သဟဇာတဖြစ်အောင်ထိန်းညှိပေးမည့် အတွေးအခေါ်အသစ်များ စ သည်တို့ပါဝင်နိုင်သည်။
မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်၏အကြောင်းအရာနှင့် စီလျော်မှုရှိသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော စီမံကိန်း ရှိသည့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ (အကျိုးအမြတ်မဟုတ်သော၊ အစိုးရမဟုတ်သော၊ အရပ် ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ) မှ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်အတွက် ကိုက်ညီမှုအကဲဖြတ် စံသတ်မှတ်ချက်များမှ အဘယ် နည်း။
ယူယူအက်စ်စီသည် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ် ရန်ပုံငွေ ရရှိအောင်မြင် သူကိုရွေးချယ်ရန် အထက်တွင်အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားသော စံသတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက် ပါ စံသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
(၁) သတ်မှတ်အကြောင်းအရာနှင့် ကိုက်ညီမှု – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်
(၂) ယူယူအက်စ်စီ၏ ချဥ်းကပ်မှုများနှင့် တန်ဖိုးထားမှုများ – လျှောက်ထားချက်များသည် ယူ
ယူအက်စ်စီ၏ တန်ဖိုးထားမှုများအား ထင်ဟပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယူယူအက်စ်စီ၏ Protecting Human Rights in Burma မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေး ချဥ်းကပ်မှု နှင့် ကိုက်ညီရ
(၃) အကျိုးသက်ရောက်မှု – စီမံကိန်းသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုခံရသော လူမှုအသိုင်းအ
ဝိုင်းများအား စကေး နှင့်/သို့မဟုတ် အတိုင်းအဆ ဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုး
သက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းစေရမည်။
(၄) လျှောက်ထားသူ၏ လုပ်ဆောင်မှုသမိုင်းကြောင်း – လျှောက်ထားသူသည် ဤမိတ်ဖက်
ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်၏ အကြောင်းအရာနယ်ပယ်အတွင်း ဗဟုသုတ၊ စွမ်းဆောင်ရည်
နှင့် အတွေ့အကြုံများရှိကြောင်းဖော်ပြသည့် လုပ်ဆောင်မှုသမိုင်းကြောင်းရှိရမည်။
(၅) တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဖန်တီးခြင်း – လျှောက်ထားချက်ကို စီမံကိန်း၏ သစ်လွင်မှု၊ မတူကွဲ
ပြားမှု သို့မဟုတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်မှု အတိုင်းအဆပေါ်မူတည်ပြီး အကဲဖြတ်သွားမည်
ယူယူအက်စ်စီသည် စိတ်ဝင်စားကြောင်းအဆိုပြုစာများကို စိစစ်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ဇကာတင်အုပ်စုငယ်ကို ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဇကာတင်ရွေးချယ်ခံရသူ များအား အသေးစိတ်အဆိုပြုလွှာလျှောက်ထားစေမည်ဖြစ်သည်။ ယူယူအက်စ်စီသည် ယင်းအ ဆို ပြုလွှာများမှ ရန်ပုံငွေအနိုင်ရသောစီမံကိန်းအားရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ် ရွေးချယ်သည့် ဖြစ်စဥ်၏ အဓိကရက်စွဲများနှင့် အချိန်ဇယား များမှာ အဘယ်နည်း။
လျှောက်လွှာစတင်ဖွင့်ရက် – အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက် – ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
နောက်ဆုံးဇကာတင်ရွေးချက်ရက် – ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
အဆိုပြုလွှာအပြည့်အစုံအမှီလျှောက်ထားရန်ရက် – ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
အနိုင်ရသော စီမံကိန်းအား ဖော်ထုတ်ခြင်း (ပြီးသည်နှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်) – မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအားထောက်ပံ့ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ ပမာဏရှိ ရန်ပုံ ငွေ။
မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်ကာလအတွင်း မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် မည်သည့် အရာများလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သနည်း။
မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်သူများသည် အဆိုပြုလွှာအတွင်း ဖော်ပြထားသော အစီအစဥ်အတွက်အ ထောက်အပံ့ပေးထားသော ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ ကိုအသုံးပြုပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကာ၊ ရန်ပုံငွေရရှိ ပြီး ခြောက်လအကြာ ကာလပတ်တွင် စီမံကိန်း၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတို့ကို အသိပေးမျှ ဝေရန် မိတ်ဖက်ပါတနာအား ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကို လက်ခံလုပ်ဆောင်ရန်ပါဝင်ပြီး စီမံ ကိန်းပြီးဆုံးပြီး တစ်လအကြာတွင်မူ အဆုံးသတ်ပြီးမြောက်မှုအစီရင်ခံစာကို တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။